Spain oo dhimashadii gaadhey 769 maanta oo kaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Spain oo dhimashadii gaadhey 769 maanta oo kaliya
Tirada dhimashada cudurka coronavirus ee Spain ayaa kor u kacday 769 habeenimo ilaa 4,858, laakiin sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka ayaa sheegay in tirada maalinlaha ah ee tirada dhimashada ay xasilloon tahay.
Dalka Spain ayaa kaalinta labaad kaga jira dalka Talyaaniga tirada dhimashada coronavirus-ka adduunka oo dhan, tirada dadka cudurkaasi haleelay waxay sare u kacday xalay ilaa 64,059 laga bilaabo 56,188 Khamiista.
Maanta waxaan leenahay dhimashada ka badan tii la diiwaangeliyay shalay, laakiin sidoo kale waa run in boqolkiiba marka la eego, korodhka maanta wuxuu u dhigmaa midkii la soo dhaafay seddexdii maalmood ee la soo dhaafay, taas oo aan u muuqato inaan u aragno xasillooni cad, “ayuu yiri madaxa deg-degga ah ee caafimaadka deg deg ah Fernando Simon. shirkii jimcaha.
Tirada dhimashada 24-kii saac ee la soo dhaafay marka loo eego tirada boqolleyda ayaa ahayd 19 boqolkiiba, sida lagu sheegay xisaabinta wakaaladda wararka ee Reuters.
Spain waxay la halgameysaa la tacaalidda cudurka dillaacay, iyadoo garoon kubadeed oo Real Madrid ah loo istcimaalay sidii bakhaar dawooyin lagu kaydiyo iyo garoon caddaalad ah oo ku yaal Madrid ayaa loo beddelay aag tijaabo ballaaran.
Bukaannadu waxay sii wadaan inay ku qulqulaan isbitaallada Isbaanishka, halkaas oo shaqaaluhu la kulmaan yaraanta qalabka difaaca sida waji-xidhka.
In kabadan 9,400 shaqaalaha caafimad ayaa tijaabiyey cudurka fayras, ayuu yidhi Simon. Taasi waa qiyaastii 15 boqolkiiba dadka cudurka ku dhacay Spain.
Spain waxay sii kordhisay xayiraada guud ahaan dalka Khamiista 15 maalmood oo dheeri ah illaa 12ka Abriil oo ay sheegtay inay ku dagaallameyso “dagaal dhab ah” oo ku saabsan sahayda caafimaadka si loo xakameeyo tirada dhimashada. Waxay u weecatay dhanka Shiinaha, halkaasoo ay coronavirus ka timid, badeecooyin badan oo muhiim ah.
Iskuulada, baararka, makhaayadaha iyo dukaamada iibiya waxyaabaha aan lagamamaarmaanka ah ayaa la xirey ilaa iyo 14-kii Maarso dad badana waa dad guri ku xiran iyadoo Spain ay isku dayeyso inay joojiso faafitaanka viruska.
Previous articleItoobiya ku dhawaaqday iney heshey Dawada covid 19
Next articleMaxabiis gaadheysa 800 oo la siideynayo somaliland +Sababta
Miyey Fadhiisteen Mashiinadii Kelyaha ee Cisbitaalka Guud ee Hargeysa